Cranberry (ခရမ်ဘယ်ရီသီး) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Cranberry (ခရမ်ဘယ်ရီသီး)
ခရမ်ဘယ်ရီရဲ့ ရရှိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
အမေရိကန်အရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ ပေါက်ရောက် သီးပွင့်လေ့ရှိတဲ့ ခရမ်ဘယ်ရီသီးဟာ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းအတွက် ကာကွယ်ရေးနဲ့ကုသရေးမှာ အသုံးများကြတဲ့ အသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ခရမ်ဘယ်ရီကို ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်း၊ ဆီးအိမ်ရောဂါ၊ ဆီးမထိန်းနိုင်သူတွေကို ဆီးနံ့ပျောက်စေဖို့၊ ဆီးပြွန်တွေမပိတ်ဆို့အောင်ကာကွယ်ဖို့၊ ဆီးကိုစွန့်ထုတ်နိုင်ဖို့ အစာအိမ်အတွင်း ခွဲစိတ်ထားရတဲ့အနာနဲ့တဝိုက် အရေပြားကို အနာကျပ်စေဖို့လည်း ခရမ်ဘယ်ရီကို သုံးကြပါတယ်။
ဆီးချိုအမျိုးအစား ၂၊ နာတာရှည်မောပန်းနွမ်းနယ်မှုရောဂါ(CFS)၊ ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း၊ အအေးမိခြင်း၊ တုပ်ကွေး၊ နှလုံးရောဂါ၊ မှတ်ဉာဏ်၊ Helicobacter pylori(H. pylori) ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲအနာများ၊ အဆုတ်အမြှေးရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ ကင်ဆာတို့အတွက်လည်း တချို့က ခရမ်ဘယ်ရီကိုသုံးကြပါတယ်။
အစားအသောက်အနေနဲ့တော့ ခရမ်ဘယ်ရီကို ဖျော်ရည်၊ ကော့တေး၊ ဂျယ်လီနဲ့ ဆော့စ် ပုံစံတွေနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ခရမ်ဘယ်ရီက ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဓါတ်စာလို့ သိကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ပိုးဝင်လေ့ရှိသူတွေအတွက်ပေါ့။ ခရမ်ဘယ်ရီမှာပါတဲ့ proanthocyanidins (PACs) ပါဝင်မှုမြင့်မား တာကြောင့် ဆီးလမ်းကြောင်းနံရံတွေမှာ ဘက်တီးရီးယားတွယ်ကပ်နိုင်စွမ်းကို အားလျော့စေပြီး ရောဂါပိုးဝင်ရောက်မှုကို တိုက်ထုတ်ပေးပါတယ်။
ခရမ်ဘယ်ရီမှာပါဝင်တဲ့ polyphenols တွေကြောင့် အဆီချေးတွေစုပုံခြင်းကိုကာကွယ်ပြီး သွေးတိုးကိုကျစေလို့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဖြစ်နိင်ခြေကိုလျော့နည်းစေပါတယ်။
ခရမ်ဘယ်ရီတွေဟာ အကျိတ်ဆက်လက်ကြီးထွားမှုကို နှေးကွေးစေနိုင်တဲ့အစွမ်းအာနိသင်ရှိသလို ဆီးကျိတ်၊ အသည်း၊ ရင်သား၊ သားအိမ်နဲ့ အူမကြီးကင်ဆာတွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်လို့ သုတေသနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ခရမ်ဘယ်ရီမှာပါတဲ့proanthocyanidins ကသွားတွေမှာဘက်တီးရီးယားမကပ်ငြိအောင် ကာကွယ်ပေးပြီး ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အကျိုးပြုပါတယ်။ ခရမ်ဘယ်ရီတွေက သွားဖုံးရောဂါကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။
၅) အစာအိမ်ကင်ဆာနဲ့ အစာအိမ်အနာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးခြင်း
အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့H. pylori ပိုးကိုကာကွယ်ပေးပြီး အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးတဲ့ A-type proanthocyanidinsဒြပ်ပေါင်းလည်း ခရမ်ဘယ်ရီမှာပါရှိပါတယ်။
သုတေသနအရ ခရမ်ဘယ်ရီသီးဖျော်ရည်ကို တစ်နေ့ လီတာဝက်သောက်တဲ့သူတွေဟာH. pyloriကူးစက်ရရှိမှု သိသိသာသာလျော့ျကျစေနိုင်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။
ခရမ်ဘယ်ရီသီးတွေမှာ နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးများတဲ့ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒိအထဲမှာanthocyanins၊ proanthocyanidins နဲ့ quercetin တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
လက်တွေ့လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေမှာ ခရမ်ဘယ်ရီသီးဖျော်ရည်နဲ့တခြားထုတ်ကုန်တွေဟာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေများစေနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်အချက်တွေအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိတာတွေ့ရပါတယ် –
အကျိုးပြုကိုလက်စထရော (HDL) ပမာဏကို တိုးစေခြင်း
မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရော (LDL) ကို ကျစေခြင်း(ဆီးချိုရောဂါမှာ)
LDL ကိုလက်စထရောကို ဓါတ်တိုးခြင်းမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးခြင်း
သွေးထဲက homocysteine ပမာဏကိုလျော့ကျစေပြီး သွေးကြောအတွင်းရောင်ရမ်းမှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပေးခြင်း
သင်ဟာcoumadin လို့သိကြတဲ့သွေးကျဲဆေးwarfarinသောက်သုံးနေသူဖြစ်ရင် ခရမ်ဘယ်ရီသီးကို များများမစားသင့်ပါဘူး။ ခန္ဓါကိုယ်မှာဒီဆေးရဲ့အာနိသင်အပေါ် ခရမ်ဘယ်ရီက သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလားဆိုတာကို အထောက်အထား အငြင်းပွားမှုတွေရှိပါတယ်။ ခရမ်ဘယ်ရီဖျော်ရည်နဲ့warfarin ဓါတ်ပြုမှုကြောင့်လို့ယူဆရတဲ့သွေးယိုစိမ့်မှုဆိုးလာတဲ့အခြေအနေတွေတွေ့ရှိခဲ့ရဖူးလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ခရမ်ဘယ်ရီထုတ်ကုန်တွေဟာ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်စေနိုင်တဲ့ ဆီးထဲကoxalate စွန့်ထုတ်မှုကိုတိုးစေနိုင်ပါတယ်။
ခရမ်ဘယ်ရီဖျော်ရည်ကatrophic gastritis ရှိသူတွေမှာ ဗီတာမင် B12 ကို ခန္ဓါကိုယ်ကစုပ်ယူတဲ့ပမာဏကို တိုးမြင့်စေနိုင်ပါတယ်။
တချို့ခရမ်ဘယ်ရီဖျော်ရည်တွေမှာ အချိုကဲထားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာဆီးချိုရောဂါရှိနေတယ်ဆိုရင် သကြားအတု ထည့်သွင်းထားတဲ့ ခရမ်ဘယ်ရီထုတ်ကုန်တွေကိုပဲရွေးချယ်ပါ။
ခရမ်ဘယ်ရီဖျော်ရည်ဟာ အစာအိမ်အက်စစ်ပမာဏလျော့နည်းနေသူတွေမှာ ဗီတာမင် B12 ကိုခန္ဓါကိုယ်က စုပ်ယူမှုပမာဏ ပိုတိုးစေနိုင်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စက်တင်ဘာ 26, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 26, 2017